Dibadbaxyo waaweyn oo ruxay Caasimada Ruushka ee Moscow | Xaysimo
Home War Dibadbaxyo waaweyn oo ruxay Caasimada Ruushka ee Moscow
Dibadbaxyo waaweyn oo ruxay Caasimada Ruushka ee Moscow
In ka badan 600 oo ruux ayaa xabsiga loo taxaabay shalay, ka dib markii ay dibadbaxyo aan fasax loo heysanin ka dhaceen magaalada Moscow ee caasimadda u ah dalka Ruushka.
Dadka bannaan baxaya ayaa isugu tagay meelo kamid ah caasimadda, iyagoo tallaabadan qaaday markii ay mas’uuliyiinta dalkaas aqoonsigii kala noqdeen tiro kamid ah musharraxiinta mucaaradka ee isku diyaarinayay doorashooyinka maxalliga ah.
Mas’uuliyiinta Ruushka ayaa markii hore sheegay in tirada dadka la xiray ay tahay 30 ruux oo kaliya, dibadbaxana ay ka qeyb galeen 350 qof.
Hay’ad kormeer ku sameysa xariga dadka oo lagu magacaabo OVD-Info ayaa sheegtay in dadka la xirxiray ay ka billowdeen tobannaan balse ay markii dambe gaareen boqollaal.
Carada ayaa dhalay ka dib markii ay Mas’uuliyiinta doorashada xubno ka mid ah siyaasiyiinta garabyada mucaaradka ka mamnuuceen inay u istaagaan doorashada maxalliga ah ee qorshuhu yahay inay Moscow ka dhacdo 8-da bisha Sitember.